रामचन्द्रले तपाईं सुध्रने कि नसुध्रने ? भनेपछि देउवा चुपचाप | Seto Khabar
रामचन्द्रले तपाईं सुध्रने कि नसुध्रने ? भनेपछि देउवा चुपचाप
काठमाण्डु, २१ जेठ– कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई ठूलो छाती बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् ।
‘आगामी दिनमा हाम्रा बाटा कठिन छन् । सरकार गठन, पार्टी संरचना गठन, नीति तथा कार्यक्रम के कसरी अगाडि जान्छ ? सरकार कसरी बन्छ ? म पार्टीकै बारेमा चिन्तित छु,’ पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अब पार्टी, सरकार सञ्चालन, पार्टीका विभिन्न विभिन्न निकाय गठन कुन आधारमा हुने हो ? कुन क्राइटेरियामा हुने हो ? कुन मान्यतामा हुने हो ? कुन विधि, पद्धति र आचरणमा हामी हिँड्ने हो ? धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन् ।’
उनले जनतालाई विश्वास दिलाउन सभापतिले त्याग नदेखाएको गुनासो पोखे । ‘यो त्यागको समय हो । दलको नेता आफैं हुनुहुन्छ । बहुमत पनि छ । प्रचण्डजीलाई यहाँ ल्याएर समर्थन पनि लिनु भएको छ । अब त्यस्तो अवस्थामा तपाईंले त्याग गर्नु हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन,’ पौडेलले थपे, ‘तपाईं (देउवा) त्याग गर्न सक्नु हुन्न भने म नै त्याग गर्छु । कसै न कसैले त्याग गरेर देखाउनुपर्यो ।’
पौडेलले आफ्नो क्रियाशीलताले नै संविधानसभा दोस्रो निर्वाचनमा पार्टीले पहिलो स्थान ल्याएको दाबी गर्दै भने, ‘त्यतिबेला उहाँ (देउवा) कति खटिनु भयो ? कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी कसरी बनाइयो । सबैले देखेकै छन् ।’ कांग्रेसभित्र सामान्य उपचारले नहुने रोग लागिसकेको बताउँदै पौडेलले आफूलाई सधैं जोखिममा राखेर पार्टी र प्रजातन्त्रलाई जोखिममा जान नदिएको बताए ।
सभापति देउवाप्रति आक्रामक शैलीमा देखिएका पौडेलले भने, ‘अब कांग्रेसको छवि सुधार्दै लोकतान्त्रिक आचरण र पद्धतिमा पार्टीलाई हिँडाउने कि नहिँडाउने ? पार्टीभित्र गतिशीलता कसरी पैदा गर्ने ? के गरी कार्यकर्तामा उत्साह र जाँगर पैदा गराउने ? के गरी जनतामा आशा र भरोसा जगाउने ? पौडेलको भनाइमा देउवाले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।